Topic: ပရိဘောဂ, ပြည်ထဲရေး
ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ ထောင့်ဆိုဖာဝယ်ချင်ပါတယ် ဘယ်ယန္တရားကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်၊ လင်းပိုင်လား၊ ယူရိုစာအုပ်လား။
ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ ထောင့်ဆိုဖာဝယ်ချင်ပါတယ် ဘယ်ယန္တရားကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်၊ လင်းပိုင်လား၊ ယူရိုစာအုပ်လား။ ငါလင်းပိုင်ကိုအကြံပေးသည်၊ ငါအဓိကကြိုက်တာကတော့ထုတ်လုပ်သူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပရိဘောဂများသည်အလင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကောင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မင်းအိပ်ရင် ...
ဘယ်မီးဖိုချောင်ကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ ငါ glossy-on nm အမြဲလက်ဗွေကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ပါ Matte, တောက်ပပေါ်အားလုံးအစက်အပြောက်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဝက်ကလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတာ။ ဦး ...
ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုတာဘာလဲ၊ ပရိဘောဂတွေကို chipboard နဲ့ chipboard တို့နဲ့ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များသလဲ။ ကလေးတွေရဲ့ပရိဘောဂတွေကိုဝယ်ပြီးအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ chipboard ထဲကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။ အနံ့ဆိုးနေတဲ့အတွက်ကလေးတွေကအိပ်လို့မရဘူး။ ငါတို့တစ်ပါတ်ပြောင်းခဲ့တယ်
ရေခဲသေတ္တာသော့ခတ်! အိမ်နီးချင်းတွေကရေခဲသေတ္တာပေါ်မှာသော့ခတ်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒီဟာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကမြင်ဖူးလား။ စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်သော့ခတ်ထားသောခေတ်မီရေခဲသေတ္တာတစ်ခုကိုတွေ့သောအခါကျွန်တော်အံ့သြသွားသည်။ ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။ နှင့်…
ပြေးတဲ့မီတာကဘာလဲ? အကျယ် ၁ မီတာအကျယ် ၁ မီတာအမြင့် ၁ မီတာအလျား ၁ မီတာအရှည်ရှိပြီးမီတာ ၁ မီတာအရှည် ၁ မီတာအကျယ်ထည်မှာ ...
အရောင်နှင့်အမြှုပ်ရော်ဘာများ၏သိပ်သည်းဆကိုဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်မလဲဆိုဖာတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးသိပ်သည်းဆကဘာလဲ။ နှင့်ဆိုဖာများအတွက်အကောင်းဆုံးသိပ်သည်းဆကဘာလဲ? သိပ်သည်းဆအရောင်အားဖြင့်ခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။ နိယာမကတော့ပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့အလေးချိန်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ။
အဆိုပါ electrolux ရေခဲသေတ္တာအကြောင်းပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ? ၀ ယ်တာလား။ ငါမှာ Kaliningrad စည်းဝေးပွဲရှိတယ်။ ရေခဲသေတ္တာကိုယ်တိုင်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပလပ်စတစ်ဟာ့ဒ်ဝဲဟာငရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ VestFrost Electrolux ရှိအကောင်းဆုံးရေခဲသေတ္တာသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ဘယ်ခေါင်းအုံးကကုလားအုတ်ဒါမှမဟုတ် holofiber ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်ဟာပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတာရှည်ခံပါသလဲ။
ဘယ်ခေါင်းအုံးကကုလားအုတ်ဒါမှမဟုတ် holofiber ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်ဟာပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတာရှည်ခံပါသလဲ။ အဆိုပါ holofiber ခေါင်းအုံး၏ elasticity 1 လက်ဆေးအထိဖြစ်ပါတယ်။ သိုးမွှေးအကြောင်းဘာမှမပြောနိုင်ပါ ကုလားအုတ် ...
ထိုရေမြှုပ်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအခြောက်ခံရန်လိုအပ်သနည်း။ အပူခန်း၊ အခန်းအပူ။ အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ သင်တံခါးများ၊ တံခါးများ၊ တောင်စောင်းများစသည်တို့ကိုမြှုပ်ထားပါကအချက်များကို ဦး စွာဖော်ပြပြီးလျှင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ...
ငါမီးဖိုချောင်တွင် freestanding အဝတ်လျှော်စက်တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တယ်၊ ၆၀ စင်တီမီတာမတော်တဆမတိုက်ဘူး စက်လည်ပတ်သည့်အခါအသေးစားစက်များသည်အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ပြီးတော့နံရံတော်တော်လေးကိုထိလိုက်တယ်။
modular ပရိဘောဂဆိုတာဘာလဲ ကျွန်ုပ်သည်မှားသည်ဆိုပါကဤအရာသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်ပရိဘောဂဆိုသည်မှာကက်ဘိနက်ပါသည့်မည်သည့်ပရိဘောဂမဆို။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်ကြမ်းပြင်၊ ခေါင်မိုး၊ နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်နောက်ကျောနံရံများရှိသည်။ modular ပရိဘောဂ ...
မည်သည့်မီးဖိုချောင်ရေကန်သည်ပိုကောင်းသော "mortise" သို့မဟုတ် "overhead" ဖြစ်သနည်း၊
မည်သည့်မီးဖိုချောင်ရေကန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော mortise သို့မဟုတ် overhead ဖြစ်သည်၊ +/- ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်တကယ့်ပူပြင်းသည့်အလုပ်ရုံတစ်ခုတွင်မီးဖိုချောင်တစ်ခုရှိသည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးချက်ပြုတ်၊ စည်သွတ်နှင့်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များဖြစ်သည် ...
အိပ်ရာပိတ်ချောကိုဝယ်ချင်လား။ ဆိုက် 1300 r တွင်။ မိသားစုအသုံးအဆောင်။ ငွေဖြုန်းတီးသည်မဟုတ်လော။ ထည်ကိုကြည့် သူတို့ကပိတ်ကျဲစကကဲ့သို့ရှိသည်။ မထိုက်တန်ဘူး။ ငါတို့အလုပ်မှာ ...
Desktop ၏အမြင့်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သင့်သနည်း ???? ၆၀ စင်တီမီတာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ! စားပွဲတင်ဇများအတွက်စံသတ္တုထောက်ခံမှု = 60 + ညှိနှိုင်းမှု + စားပွဲပေါ်မှာ။ စားပွဲတစ်လုံးအတွက် ...
ငါ့ကိုကြမ်းပြင်ကနေကုလားကာအထိမည်မျှစင်တီမီတာဖြစ်သင့်သည်ငါ့ကိုပြောပြပါ? ငါကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကျိန်ဆိုသည့်အခါ, ဖက်ရှင်မှာနှာချေသောအခါငါမကြိုက်ဘူး။ စင်တီမီတာ ၂၊ ကြမ်းပြင်မှ ၃ ။ ငါး။ 2-3 ခန့်။ ကုလားကာအရှည် ...
eco-leather ဆိုတာဘာလဲ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကြိုးစားရှင်းပြတာကအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာသာမန်သားရေထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ အဲဒါမှန်ပါသလား Eco-leather သည်ရှူရှိုက်သည့်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုမူကား…
ကုလားကာပေါ်ဆွဲထားသောဤအရာကဘာလဲ? Pasternak မှာ ... Unwrapped ကုလားကာအဖွင့်မှတဆင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ။ ကုလားကာများသည် cornice တွင်ချိတ်ဆွဲထားပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုဆွဲထုတ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် =))) တက်ဆွဲကြပါဘူး။ Wikipedia-Cornice ...
ကျွန်တော်ကုလားကာဘယ်အရွယ်အစားကိုယူသင့်ပါသလဲ သင်လိုချင်သောကုလားကာပုံစံကိုလွယ်ကူစွာချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ တိုင်းတာသူသည်သင့်ထံသို့လာလိမ့်မည်။ တိုင်းတာမည်။ ထို့နောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံစံကိုရွေးရမည်။
မှန်ရဲ့နောက်ကျောကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ Amalgam ။ မှန်ပေါ်ရှိပျက်စီးသွားသောပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်၊ ချောမွေ့စွာပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာကိုစက္ကူဖြင့် ...
ဘယ်မေးခွန်းတွေကနွေ (orthopedic polyurethane foam) ထက်ပိုတာလဲတာရှည်ခံတာလား ???? ငါမေးခွန်းကိုအများကြီးဖွင့်သည်အရိုးအထူးကုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးတာရှည်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတန်းဖော်နှင့်တူတူအိပ်ရာများ (ရိုမေးနီးယားမှထုတ်လုပ်သောစမ်းရေများ - ကလေးဘဝမှ) ။
57 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 4,184 စက္ကန့်ကျော် Generate ။